मधुलाइ “सुम्पेको छु जीवन” भन्दै बिना आइन मिडियामा किन ? (हेर्नुहाेस भिडियो) « Light Nepal
मधुलाइ “सुम्पेको छु जीवन” भन्दै बिना आइन मिडियामा किन ? (हेर्नुहाेस भिडियो)
Published On : 14 April, 2019 2:12 pm
बैशाख ०१ । नव बर्षको कोशेली स्वरूप चर्चित गायिका टिका प्रसाँईकोे “सुम्पेको छु जीवन” गीत सार्बजनिक भएको छ । आर बी थापाको शब्द अनि संगीत रहेको गितको भिडियो भर्खरै युव्टुव मार्फत बजारमा आएको हो । उक्त गितको भिडियो भारतको सिक्किम र झापाको सेल्फीडाँडा लगायतका स्थानमा छायाङ्कन गरिएको हो ।
गायिका टिका प्रसाँईको विशेषत माया लुकी लुकी, नाई मलाई थाहा छैन जस्ता फास्ट विटका गितहरु अहिले बजारमा चर्चित रहेपनि “सुम्पेको छु जीवन” विलकुल फरक धारको गित भएकाले यस्लाई पनि गीतसंगीत प्रेमीले उक्तिकै माया गर्ने कुरामा निर्माण पक्ष विस्वस्त रहेको छ ।
भिडियोमा ख्याति प्राप्त कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा चिनिएका मोडेल मधु न्यौपानेकाे साथमा, विना दङ्गाल र रुपा कट्टेलको अभिनय देख्न सकिन्छ । मोडेल न्यौपाने हाल सञ्चार क्षेत्रकाे साथै मोडलिङमा पनि व्यस्त देखिएका छन् । यसअघि दर्जन बढि म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका न्यौपानेले हिन्दि गीतकाे भिडियाेमा पनि आफ्नो अभिनय प्रस्तूत गरीसकेका छन् । उक्त भिडियाेमा अर्जुन सापकोटाको छायांकन र सुन्दर लावतीको सम्पादन तथा निर्देशन रहेको छ ।हेर्नुहाेस भिडियोः